Dare rePamusoro Rinomisa Zvakaitwa neHealth Services Board Kuna VaDongo.
Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo unomisa danho rakanga ratorwa neHealth Services Board, rekurambidza mutungamiri wesangano ravanamukoti reZimbabwe Nurses Association, VaEnock Dongo, kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro dzinoitwa pasi peHealth Services Bipartite Negotiating Panel.
Health Services Board yakanga yatora danho iri ichipa chikonzero chekuti VaDongo, avo vaimboshanda semukoti pachipatara cheSally Mugabe muHarare, vakanga vasisiri mushandi wehurumende mushure mekunge vasiya basa.
Asi sangano reZimbabwe Nurses Association pamwechete naivo VaDongo vakapikisa danho iri kuburikidza nekuenda kudare reHigh Court vachiti danho iri rakanga rakanangana nekunyaradza VaDongo, avo vakanga vaendesa mushandirwi kumatare mune imwe nyaya vachipikisa danho rekurambidza mashandiro evakoti aivepo nguvayo akanga akasununguka, kana kuti flexible hours.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare repamusoro, Justice Webster Chinamora, vanonzi vati hapana mutemo unorambidza vakoti kumirirwa munhaurirano nemutungamiri avanoda, zvisineyi nekuti anoshanda muhurumende here kana kuti kwete.
Studio 7 yakundikana kubata gweta reHealth Services Board, VaChitekuteku avo vabva kuhofisi yegweta guru renyika, kana kuti kwaAttorney-General.
Asi VaDongo, avo vanga vachimirirwa mudare naVaTinotenda Matonhodze vekambani yemagweta yeMatizanadzo and Warhurst, vanoti vanotambira nemufaro mukuru mutongo wedare repamusoro uyu, sezvo wasimbisa mashandiro avo mukumirira vakoti.